We She Me: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုထူးတေဇာ
Anonymous - 9/2/08, 10:33 PM
ကိုအန်ဒီရေ .. နာမည်ကြီးဘလောဂါ့ဆိုပြီး ထည့်၂ပြောတာတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ။ ကိုအန်ဒီလို hit တွေအများကြီး ရနေတဲ့သူက ဂျစ်တူးဘလောဂ့်ကို နာမည်ကြီးတယ် ပြောပြောနေတော့ ၊ အမှန်ဝန်ခံရရင်တော့ ဘ၀င်လေဟပ်ချင်သားး)
တကယ်တော့ ကိုယ့်ဘလောဂ့်ကို လူကြိုက်များရင် လူတိုင်း ၀မ်းသာကြမှာပါပဲလေ ။ ဂျစ် မကြိုက်ဆုံးကတော့ နာမည်ကြီးဖို့ လုပ် ရေးတဲ့ ဘလောဂ့်တွေကိုပါပဲ ။ ဂျစ် ယုံကြည်တာ လူတွေဟာ ဘလောဂ့်ပေါ်မှာ နာမည်မဖော်ဘဲ ရေးကြတယ်ဆိုပေမယ့် ၊ ကိုယ့်ဘလောဂ့်ကို အချိန်ပေး လာဖတ်သူတွေအပေါ် လေးစားသမှုနဲ့ honesty အပြည့်ရှိသင့်တယ်လို့ ။
Anonymous - 9/2/08, 10:37 PM
I'm alsoaregular visitor of your blog.
ဇနိ - 9/2/08, 10:49 PM
သူရွေးမယ်လို့ ရှေ့ ၂ post လောက်က ကြိုပြောကတည်းက ဘယ်သူတွေကို ရွေးမှာလဲ ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်....ကို အန်ဒီတို့ ကို Degolar တို့တွေ့တော့ သူလည်း ငါနဲ့ အကြိုက်တူတာပဲ ဆိုပြီး တွေးမိသွားသေးတယ်။
ကိုအန်ဒီတို့ရဲ့ ဝီရှီမိကတော့ ကျနော့် အကြိုက်ဆုံးထဲက အကြိုက်ဆုံးတခုပါပဲ။
MrDBA - 9/3/08, 12:37 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျို့ ကျွန်တော်လဲ ဘယ်သူရမလဲစိတ်ဝင်စားနေတာ ဒီနေ့ နေ့လည်အထိသွားချောင်းနေသေးတယ် ..
ပီတိ - 9/3/08, 2:21 AM
ကိုအန်ဒီရေ… ထိုက်တန်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ တကယ်လည်းကောင်းအောင် ကြိုးစားထားတဲ့အတွက် ရတာပါ။
ဂျစ်တူးကတော့ သူ့ကိုသူနာမည်မကြီးဘူးလုပ်နေတာပဲ၊ မုန့်ကျွေးရမှာကြောက်လို့ဖြစ်မယ်… ;)
kyaw - 9/3/08, 3:22 AM
Moe Cho Thinn - 9/3/08, 3:52 AM
ကို Andy တို့နဲ့ ထပ်တူ ၀မ်းသာပါတယ်။ congratulations !
ဘလော့ဂ်လောကမှာ အခုထိ သိရသလောက်တော့ တယောက်ကို တယောက် appreciate လုပ်ကြတာလေးက ချစ်စရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ အလေ့အထလေးပဲနော်။
Nu Thwe - 9/3/08, 4:16 AM
Congratulations! You thoroughly deserve it. You don't need me to say that anyway. :)
Andy Myint - 9/3/08, 9:26 PM
တကယ်လည်း နာမည် ကြီးတာပဲကို တီတီဂျစ်က။ Hit တွေက ဖောင်းပွနေတာပါ။ ဟီးဟီး နာမည်ကြီးဖို့ လုပ်ရေးနေတာ ကျွန်တော့်ကိုများ ပြောတာလား မသိဘူး။ မိန်းမကတောင် သတိပေးနေပြီ။ လူအမြင်ကတ်အောင် မလုပ်နဲ့တဲ့။
Thanks for regular reading.... Reader
ဟီးဟီး ဟုတ်တယ် ကိုဇနိ.. ဘယ်သူ့ကိုများ ရွေးမလဲ ချောင်းနေတာ။ ကိုယ့်ပါသွားတော့ ပျော်တာပေါ့။
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်လည်း နားစွင့်နေတာ Mr DBA.
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ နာမည်ကြီးတွေ များတယ်။ ကိုပီတိရောပဲ။ မုန့်ကျွေး။
မှန်ပါတယ် မမိုးချိုသင်း။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ Appreciate လုပ်တော့လည်း အားရှိတာပေါ့။
Many Thanks, Nu.
မျိုးဝင်းဇော် - 9/3/08, 10:29 PM
congratulation ကိုအန်ဒီ ရွေးမယ်ဆိုရင် ဒီဘလော့ဟာ ဖတ်သူအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ် နောက် ကိုအန်ဒီ ညွှန်းတဲ့သတင်းနဲ့ အခြားဘလော့တွေရဲ့ post တွေဟာ အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဘဲ ရွေးချယ်သူအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာပေးသင့်နေပြီ
JulyDream - 9/4/08, 1:34 AM
TZA - 9/5/08, 1:39 AM
အလိုလို၊ ကိုယ့်ကိုနာမည်ကြီးတယ်ဆိုလို့ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်၊ အဲနီးဝေး၊ ညွှန်းတဲ့သူရှိတော့လည်း ပျော်တာပေါ့၊ အင်းလေ၊ သိပ်ပျော်တာပေါ့။
ကိုအန်ဒီဘလော့ဂ်ကို အမြဲဝင်ဖတ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် (ဟမ်)
တန်ခူး - 9/9/08, 6:46 PM
စုစု - 9/25/12, 8:05 PM
ဒီနေ.အစ်ကို.စာတွေ အများကြီးဖတ်ဖြစ်တယ်။ မန်.လည်းတော်တော် မန်.ခဲ့ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မန်.ခဲတယ်။